China Electric zoro orinasa vy tilikambo sy mpanamboatra | Qiangli
Tilikambo vy ny angle dia tsanganana lovia miaraka amin'ny downcomer. Ny faritra miboiboika dia vita amin'ny vy zoro mifanila amin'ny tsirairay, ary ny lamin'ny fandaminana ny vy zoro dia mifanitsy amin'ny làlan'ny fikorianan'ny rano. Ny sisin'ny maranin'ny vy zoro dia eo amin'ny faritra ambany, ary ny fizarana hazo fijaliana dia miendrika "V". Misy elanelana misy eo anelanelan'ny vy vy roa mifanakaiky aminy. Ilay midina dia mitovy amin'ny lovia mahazatra. Ny ranon-javatra ao amin'ny lovia ambony dia mivezivezy mankany amin'ny vy zoro "V" amin'ny alàlan'ny downcomer, raha miboiboika miaraka amin'ny ranoka kosa ny gazy rehefa miakatra amin'ny elanelana misy azy, ary ny fantson-dranon-tsiranoka misy eo amin'ny lovia dia mitovy amin'ny amin'ny sivana vilia. Ny valiny dia mampiseho fa ny fihenan'ny tsindry fantsom-by vy dia kely, lehibe ny fahafahan'ny fifanakalozana gazy, tsara ny fahombiazan'ny fantsona, tsotra ny rafitra, mora ny fanodinana sy ny famokarana ary tsara ny henjana. Na izany aza, ny fahombiazan'ny tilikambo lovia sivana dia tsy tsara toy ny an'ny sivana plate menina rehefa kely ny fahaizan'ny fitsaboana. Ny tilikambo vy dia matetika ampiasaina any an-tsaha, ary ny tsato-by fantsom-by sy ny fantsom-by amin'ny ankapobeny dia ampiasaina amin'ny faritra an-tanàn-dehibe satria kely kokoa noho ny tilikambo vy ny zoro.
Ny tilikambo vy misy zoro herinaratra dia karazana rafitra vy izay afaka mitazona elanelana azo antoka azo antoka eo anelanelan'ny mpampita sy ny tranobe ao anaty tsipika fandefasana.
Previous: Tilikambo vy vy
Manaraka: Tilikambo vy vy
Tilikambo famindrana angovo vy
Tilikambo vy anggoro elektrika
Tilikambo vy amin'ny angovo elektrika
Tilikambo vy vy zoro elektrika dia karazana vy vy izay afaka mitazona elanelana azo antoka azo antoka eo anelanelan'ny mpampita sy ny tranobe eo amin'ny tsipika fandefasana. Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, niaraka tamin'ny fitomboana haingana ny toekarem-pirenena, ny indostrian'ny angovo dia nivoatra haingana, izay nampiroborobo ny fampandrosoana haingana ny indostrian'ny tilikambo mpampita. Araka ny antontan'isa, ny fidiram-bola amin'ny indostrian'ny tilikambo mpampita amin'ny ...
Tilikambo vy vy zoro elektrika dia karazana vy vy izay afaka mitazona elanelana azo antoka azo antoka eo anelanelan'ny mpampita sy ny tranobe eo amin'ny tsipika fandefasana. Tamin'ny taona 1980, firenena maro eto amin'izao tontolo izao no nanomboka nametraka piraofilina vy tamin'ny rafitry ny tilikambo rehefa namorona tsipika fandefasana UHV. Tilikambo fantsom-by vy misy fantsom-by toy ny fitaovana lehibe niseho. Any Japon, ny tilikambo fantsom-by dia saika ampiasaina amin'ny 1000kV U ...
Tilikambo vy misy zoro elektrika Miaraka amin'ny fivoaran'ny fotoana, ny tilikambo herinaratra dia azo sokajiana arakaraka ny fitaovana fananganana, ny karazana rafitra ary ny fampiasana ny asany. Araka ny vokatra samihafa, hafa ihany koa ny fampiasan'izy ireo. Andao hazavao fohifohy ny fanasokajiana sy ny fampiasana lehibe azy ireo: 1. Araka ny fitaovam-panamboarana, azo zaraina ho firafitra hazo, firafitra vy, firafitry firaka aliminioma ary tilikambo vita amin'ny beton nohamafisina. Noho ny ...
Tilikambo vy vy zoro elektrika dia karazana vy vy izay afaka mitazona elanelana azo antoka azo antoka eo anelanelan'ny mpampita sy ny tranobe eo amin'ny tsipika fandefasana. Miaraka amin'ny fitomboan'ny fitakiana herinaratra any Shina, miaraka amin'izay koa, noho ny tsy fahampian'ny loharanon-tany sy ny fanatsarana ny fepetra fiarovana ny tontolo iainana, ny olana amin'ny fisafidianana ny zotra sy ny fandravana trano manamorona ny tsipika dia manjary ...
Tilikambo vy anggoro elektrika, Tilikambo famindrana angovo vy, Rafitra vy amin'ny Tube, Firafitra Steel Prefab, Tilikambon'ny Serasera Kaonty, Tilikambo vy amin'ny angovo elektrika,